समाचार Archives - Page2of 135 - Riddle Nepal
santosh Nov 3, 2018 0
धरानतर्फ आउदै गरेको महिन्द्रा पिकअप दुर्घटना , दुई जनाको घट्नास्थलमै…
Uncategorized अन्तराष्ट्रिय अन्तर्वार्ता आर्थिक आस्था/धार्मिक खाडी खेलकुद
निर्मला हत्याकाण्डमा उब्जिएको अर्को प्रश्न: ‘भेजिनल स्वाब’ सक्कली त हो ?
santosh Sep 30, 2018 0
१४ असोज, काठमाडौं । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तका संकलन गरिएको ‘भेजिनल स्वाब’ माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । निर्मलाका आमा दुर्गादेवी र बुबा यज्ञराज समेतले ‘भेजिनल स्वाब’ निर्मलाकै भएको पहिले पुष्टि गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।…
के गर्दैछन् प्रचण्डको गाला चड्काउने पदम कुँवर ?
काठमाडौं, १४ असोज । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन र त्यसअघि सर्वाधिक चर्चामा आएका पदम कुँवर यतिबेला गुमनाम छन् । ०६९ सालमा भृकुटीमण्डपमा भएको कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष (तत्कालिन एकीकृत नेकपा माओवादी) पुष्पकमल दाहाल…
निर्मलाका बाबुले भावुक हुँदै भने ‘सरकारले आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै गर्यो’
काठमाडौं– कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी किशोरी निर्मला पन्तको ‘भेजिनल स्वाव’ र तत्कालिन कञ्चनपुरका एसपी डिल्लीराज बिष्टसहित अन्य दुईजनाको डिएनए रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ आएपछि निर्मलाका बाबु यज्ञराजले घटनाको अनुसन्धानका नाममा सरकारले आँखामा…
कमल थापाको विजयी सुरुआत, भारतका नरहरि कडेकरलाई ६-१, ६-० को सहज सेटमा पराजित
पोखरा : पोखरामा शनिबारदेखि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय आईटीएफ सर्किट-४ टेनिस प्रतियोगितामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री कमल थापाले विजयी सुरुआत गरेका छन्। थापाले ५५ वर्षमाथिको एकलमा भारतका नरहरि कडेकरलाई ६-१, ६-० को सहज सेटमा पराजित गरे। कास्की…
सिद्धार्थ यातायातको निर्णयले यात्रुहरुको मन जित्यो, चौतर्फी प्रशंसा
बुटवल, १४ असोज । सिद्धार्थ यातायात प्रालि रुपन्देहीले चाड पर्वअगाडि भाढा वृद्धि नगर्ने निर्णय गरेको छ । प्रालिका सञ्चालक समितिको बैठकले भाडा नबढाउने निर्णय गरेको अध्यक्ष सूर्य कुमार सारु मगरले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ…
पार्टी भित्राका अन्तर्घातीलाई कारबाही नगरे अर्को चुनाव पनि हारिन्छ : देउवा
काठमाडौं, १४ असोज । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा एकता र अनुशासन कायम नभए अर्को निर्वाचनमा पनि कांग्रेस पराजित हुने बताएका छन् । कांग्रेस अछाम–काठमाडौं सम्पर्क समितिद्वारा शनिबार आयोजित दसैँ, तिहार, नेपाल सम्बत् र छठको…
निर्मला हत्या प्रकरणः एसपी विष्टको डीएनए मिलेन, प्रतिवेदन सार्वजनिक माग गर्दै स्थानीय फेरि आन्दोलनमा
काठमाडौं । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा निलम्बित एसपी डिल्लीराज विष्टसहित तीनजनाको डीएनए रिपोर्ट तयार भएको छ । कञ्चनपुर प्रहरीका अनुसार सकेसम्म डीएनए रिपोर्ट आज सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । तर प्रहरी उच्च…
के भएको छ सीतालाई ? प्रचण्डको राजनीतिक सक्रियता खुम्चिँदो
पुर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) एक वर्षदेखि पारिवारिक तनावमा छन् । पुत्रवियोगको शोकमा जीवनसँगिनी सीताको रोग थपिएको छ । उनको हेरचाह र उपचारमा ध्यान दिनुपर्दा नेपाली राजनीतिका चलायनमा नेता प्रचण्डको परिधि…
“कबाडी फोहोर होइन, मोहोर हो, कबाडी बटुलेर कलेज खर्च
काठमाडौं, अचेल सहरमा भाले बास्दैन । भालेको डाकसँगै पूर्व क्षितिजमा रातो डोरो पनि बस्दैन । ‘कबाडीवाला’ले लिएर आउँछन् बिहान । यस्तो लाग्छ– काठमाडौँ सहरका गल्लीहरूमा घाम पस्दैनन्, तर कबाडीवाला पस्छन् । ‘खाली सिसी… पुराना कागज…. फलाम….’…
सामूहिक बलात्कारपछि युवतीलाई मरेको सम्झेर झाडीमा फालेर गए, २७ घण्टापछि आयो होस
santosh Sep 29, 2018 0
२३ वर्षकी एक युवतीलाई सामूहिक बलात्कारपछि हत्याको प्रयास गरिएको छ । अफिसबाट घर जान लागेकी युवतीलाई बाटोमै अपहरण गरेर बलात्कार गरिएको हो । राँचीको धनबागमा रहेको फुटबल मैदानमै सामूहिक बलात्कार गरिएको बताइएको छ । त्यपछि उनलाई मार्ने उद्देश्यले…